It Pinlon Thar | facebook | aplikasi | Blogger Indonesia
It Pinlon Thar
Windows 8 Pro Preview + Product Key
Saturday,7September 2013 Unknown
Windows 8 ထွက်လာပြီးမကြာခင်မှာပဲ Windows blue လို့ခေါ်တဲ့ Windows 8.1 Preview ဟာလည်း
Download လုပ်ပီးအသုံးပြုနိုင်ပါပီ။ Windows 8.1 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဆော့လ်ဝဲလ်တွေကိုလွယ်
လွယ်ကူကူ app store ကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။Microsoft Account တော့လိုတာပေါ့။နောက်ပြီး Driver တွေအများအားဖြင့် auto သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ ပြီးစမ်း ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စက်မှာတင်တာတော့ ဘာ Driver မှ install ပြုလုပ်စရာမလိုပဲ အော်တိုသိနေပါတယ်။ Windows တင်နည်းကတော့ Windows 8 နဲ့တူတူပါပဲ။
CD သို့မဟုတ် USB နဲ့ boot တက်ပြီး ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် Language ကိုရွေး Next လုပ် ပြီးရင်
Install Now ဆိုတာကိုနိပ်လိုက်တာနဲ့ Product key လာတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာပေးထားတဲ့
Product key ကိုထည့်ပြီး Next လုပ် နောက်တစ်မျက်နှာမှာ Accept ရဲ့ရှေ့က box မှာ အမှန်ခြစ်ပြီး Next
ထပ်လုပ်လိုက်ရင် အေးဆေးထိုင်စောင့်နေလို့ရပါပီ Install ပြီးသွားပြီး restart ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စက်ပြန်တက်လာတာနဲ့ Windows 8.1 ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါပီ။ ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကိုတင်ပေးချင်ပေမယ့် အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဒီကကော်နက်ရှင်အခြေအနေမကောင်းတော့ တိုက်ရိုက်လင့်ကနေကျော်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက်
Windows Activate မဖြစ်သေးရင် Cmd ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
ဒီ slmgr -ipk MTWNQ-CKDHJ-3HXW9-Q2PFX-WB2HQ စာကို ကော်ပီယူပြီး cmd မျှ pasteချလိုက်ပီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ ။
ဒီတော့ Microsoft Toolkit ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ့်စက်ထဲမရှိသေးရင် Download ယူလိုက်ပါ။
Toolkit ကို အင်စတော လုပ်ပီးသွားရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။
Window logo လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့မှာကလစ်တစ်ချက်နိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Activation tab ကို နိပ်လိုက်ပါ ။ Activate ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကလစ်တစ်ချက်နိပ်ပေးလိုက်ပါ။ခနလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါ Activate Failed လို့လာမပြရင်တော့အောင်မြင်ပြီပေါ့ ။
Wednesday,4September 2013 Unknown
အမှားပါးရင်ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ ။နားမလည်တာရှိရင်လည်း comment ပေးထားလို့ပါတယ်။ ထောက်ပြစရာရှိရင်လည်းထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်အသုံးပြုသော Linux commands
Tuesday,3September 2013 Unknown
ကျွန်တော်ခုရှင်းပြမယ့် command တွေက အသုံးဝင်ပြီး command prompt သို့မဟုတ် Terminal
အသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးများသော Command တွေဖြစ်ပါတယ်။command တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်
ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Terminal တစ်ခုကိုပဲဖွင့်ထားလိုက်
ရုံနဲ့ ဟိုသွားဒီသွားဟိုကလစ်ဒီကလစ်လုပ်စရာမလိုပဲ တစ်နေရာထဲမှာပဲစာထိုင်ရိုက်ယုံလေးပါ။
၁. cd =change directory
cd ဆိုတာ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာတွေသွားဖို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။သွားချင်တဲ့နေရာဆိုတာက
folder တစ်ခုကနေ folder ကိုရောက်အောင်သွားတာကိုဆိုလိုတာပါ။ Window မှာတော့ folder
လို့ခေါ်ပါတယ် ။ Linux မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Directory လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ Folder ကနေ နောက်ဖိုတာ
တစ်ခုကိုပဲသွားလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး ရောက်ပတ်လည်နေလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်ခုသုံးနေတဲ့ user
အကောင့်နဲ့တစ်ခြား အသုံးပြုသူတွေအကောင့်ရဲ့ home folder တွေကိုဝင်ကြည့်တာတို့ ဖိုင်တွေသွားထည့်ပေးတာတို့လုပ်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ home folder ကိုအရင်သွားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားဖို
အတွက်ဒီ command ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လို့ရိုက်လိုက်ရင် home folder ထဲမှာရှိတဲ့ pinlonthar folder ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲခု pinlonthar ဆိုတဲ့ဖိုတာထဲကိုေ၇ာက်ပီပဲဆိုပါစို့ .ဒီ Pinlonthar ဖိုတာထဲမှာရှိတဲ့ Downloads
$cd Downloads လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ Downloads ဖိုတာထဲကိုေ၇ာက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂. ls =list
ls က ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာသို့မဟုတ် ဖိုတာတစ်ခုရဲ့အထဲမှာဘယ်ဖိုင်တွေရှိတယ်ဘယ်ဖိုတာတွေရှိ
တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုနကပြောသလို Downloads ဆိုတဲ့ဖိုတာလည်းရောက်ေ၇ာ
ls ကိုရိုက်ထည့်ပေး၇မှာဖြစ်ပါတယ်။ ls လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ ကအဲ့ဖိုတာထဲမှာရှိသမျှဖိုင်တွေဖိုတာတွေအားလုံး လာပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ
$ ls /home/pinlonthar
လို့ရိုက်လိုက်ရင် pinlonthar ဘာတွေရှိလည်းဆိုတာလာပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃. rm =remove
rm ဆိုတာကတော့ ဖြတ်တာပါ ။ဖိုင်တွေဖြတ်မယ်ဖိုတာတွေဖြတ်မယ်ပေါ့။ ဥပမာ
လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် pinlonthar.txt ဆိုတဲ့ဖိုင်ကိုဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုတာကိုတော့ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြားမှာ option ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
$rm -rf pinlonthar (folder ဖြစ်သည်)
ကြားမှာ -rf လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်ဖြတ်လို့ရပါပီ။ -rf ဆိုတာက recursive force ဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှလာ
ဒီ command ကတော့ ဖိုတာဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ
$mkdir pinlonthar လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်
pinlonthar ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖိုတာဆောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၀င်းဒိုးမှာတော့ right click >>>create new folder နဲ့တူတူပါပဲ ။
၅.touch= create file
ဖိုင်ဆောက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ့် command ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ
ဆိုတာနဲ့ pinlonthar ဆိုတဲ့ text ဖိုင်ကိုဆောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၀င်းဒိုးမှာဆိုရင်တော့
right click >> create new file နဲ့တူတူပါပဲ ။ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ဖိုင်ရလားမရလားဆိုတာ
စစ်ဖို့အတွက် ls လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါ ။pinlonthar.text ဆိုတာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆.nano=create file or configure file
nanoကတော့ touch နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး ။ဖိုင်ဆောက်တာပါပဲ ။touch ကတော့ဆောက်ယုံသက်သက်ပါ
၀င်ရေးဖို့အတွက်မပါပါဘူး။ nano ကတော့ Note pad နဲ့တူပါတယ်။ ဖိုင်ကိုဆောက်မယ်တစ်ခါထည်း
ဥပမာ ။ $nano pinlonthar.txt ဆိုတာနဲ့ အဲ့ဖိုင်ထဲမှဲာ့ကိုယ်ဘာတွေေ၇းမယ်ထည့်မယ်ဆိုတာအဆင်သင့်ဖြစ်ပီးသားပါ။ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာ စာလေးသုံးလေးကြောင်း
လောက်ရေးလိုက်ပါ့ ။ဖိုင် save ဖို့အတွက် ctrl+o enter ctrl+x လို့နိပ်လိုက်ရင် ဖိုင်ကို save လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ထဲမှာကိုယ်ရေးထားတဲ့စာတွေပြန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မှာလည်း ... လွယ်လွယ်လေးပါ ။
cat ဆိုတဲ့ command ကတော့ ဖိုင်တစ်ခုထည်းမှာ ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာတွေပြန်ဖတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
$cat pinlonthar.txt လို့ရိုက်လိုက်ရင် ခုနက ဖိုင်ထဲမှာရေးထားတဲ့စာတွေ လာပြမှာဖြစ်ပါတယ် ။
အသုံးဝင်သော Command Key များ
Monday,2September 2013 Unknown
မောင်စေတနာ စုစည်း ဖော်ပြတဲ့ " အသုံးဝင်သော Command key များ " စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးဝင်
Command key ပေါင်း ၁၁၇ ခုကို အားလုံးစုစည်း ပြီး ဖော်ပြထားတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ။ ဆောင်ထား
မယ်ဆိုရင် အများကြီး အသုံးဝင်မှာပါ။ အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ် ရယူလိုက်ပါ။
ဒေါင်းရန် >>> Dropbox
Sunday, 1 September 2013 Unknown
မြန်မာစာရေးဖို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ ။
သူများ Crack ထားတာကိုပြန်ရှဲလ်လာခဲ့တာပါ ။
လိုချင်ရင်တော့ ဒေါင်းလိုက်ပေါ့ ။
Networking Ebook with Myanmar Version
Saturday, 31 August 2013 Unknown
Networking နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ် ၈ အုပ်ကို စုစည်းဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဆရာဇော်လင်း (Youth) ရဲ့
Complete Network Guide စာအုပ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ အင်တာနက်မှာ
ရှာတွေ့တဲ့ စာအုပ်တွေကို စုစည်း တင်ပြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဇော်လင်းရဲ့ Complete Network Guide စာအုပ်ဒေါင်းရန်
>>> Download <<< From MediaFire (Link1)
>>> Download <<< From MediaFire (Link2)
>>> Download <<< From 4Shared
Network Setting how to စာအုပ်ဒေါင်းရန်
Domain Name System စာအုပ်ဒေါင်းရန်
Dynamic Host Configuration Protocol စာအုပ် ဒေါင်းရန်
Network Address Translation စာအုပ်ဒေါင်းရန်
သတင်း အချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် စာအုပ်ဒေါင်းရန်
USB ကြိုးဖြင့် PC နှစ်လုံး Network ချိတ်နည်း စာအုပ်ဒေါင်းရန်
Windows 2003 Server DHCP Tuning စာအုပ်ဒေါင်းရန်
Posted at 07:200comments
WordPress Security ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလည်း ?
Friday, 30 August 2013 Unknown
ကျွန်တော် အသိညီတစ်ယောက် သူက WP site တစ်ခုနဲ့ Run ထားတော့ အဟတ်မခံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးလို့ ကျွန်တော်လည်း Google ထဲကနေ ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးပြီး ပြန်ရှယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပြောရရင် ကျွန်တော်က WP Site တွေမကိုင်ဖူးတော့ ဟတ်ဖို့နေသာသာ ရမ်းသမ်းပြီးဘာသာပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်လို့ လိုအပ်တာများရှိရင် တတ်သိနားလည်သူများအနေနဲ့ နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ :D
ကဲ ကျွန်တော်စရွီးပါတော့မယ်။ အောက်က Tips လေးတွေကဘာပြောပြောအထိုက်အလျောက် wp site ကိုအဟတ်ခံခြင်းမရှိအောင် ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။
၁။ Default Password ကိုပြောင်းပစ်ပါ
ဒါကတော့ ပြောနေစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။ WP ရဲ့ Default user က admin Password ကလည်း admin ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ မဖြစ်မနေပြောင်းပစ်ရပါမယ်။ ပြောင်းထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မပြောင်းရသေးရင် ပြောင်းလိုက်ပါ။
၂။ Login Limit ကို ကန့်သတ်လိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ WP မှာ admin login panel ကို မသာမာသူတွေက Brute Force Attack နဲ့ Login လုပ်ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို Default အနေနဲဆိုကန့်သတ်မထားပါဘူး။ အခေါက်ဘယ်လောက်ဆိုတာမကန့်သတ်ထားတော့ တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ် ရသွားနိုင်တယ်။ အဲဒါကို ကန့်သတ်ပေးမှာပါ။3ခါမှန်အောင်မရိုက်နိုင်ရင် Access မပေးတော့နဲ့ပေါ့။ ကောင်းပါပြီ အဲဒီအတွက်
Limit Login Attempts ဆိုတဲ့ plugin လေးကို WP အတွက် သွင်းထားလိုက်ပါ။
အဲဒီကနေ Go Install ကနေ Plugin လေးကိုသွင်းထားလိုက်ပါ။ :D
၃။ Regular Backup လုပ်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုဒ်တစ်ခုတကယ်လို့ အဟတ်ခံရရင် backup file ကနေ Recovery ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ ပုံမှန် Backup လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ Backup အတွက် ဒီ တစ်ခုနဲ့စမ်းကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီတစ်ခုပေါ့။
၄။ Better WP Security ကိုသွင်းထားပါ။
ဒီ Plugin ကိုသွင်းထားမယ်ဆိုရင် သင့် WP အတွက်အထိုက်အလျောက် Security ကိုလုံခြုံစေမှာပါ။ ဒီကောင်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲ။
သူ့ရဲ့ Function အချို့ကိုပြရရင်
ဘာတွေမှန်းတော့ ကျွန်တော်လည်းသေချာမသိဘူး။ ဟီး Wordfence ဆိုတဲ့ Plugin လေးလည်းမဆိုးဘူးခင်ဗျ။ သူလည်း Function တော်တော်စုံတယ်။ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ။
၄။ WP Version ကိုအမြဲ Update ဖြစ်ပါစေ။
wp version ကိုအမြဲတမ်း update ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါ။ ဗားရှင်းနိမ့်တဲ့ဟာက Vul တွေများလွန်းပါတယ်။ Vul တွေရှိတော့ အဟတ်ခံရဖို့ ရာခိုင်နုန်းများတယ်လေ။ ဗားရှင်းအသစ်တွေကို WP ရဲ့ Official Site မှာသွားပြီး ယူနိုင်ပါတယ်။ ကဲ ကျွန်တော်ပို့စ်လေးကို အဆုံးသတ်ပါတော့မယ်။ wp site ကိုလုံခြုံစေဖို့ Google မှာရှာဖွေရင်အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီထဲက ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရာတွေကို လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် အထိုက်အလျောက် လုံခြုံစေမှာပါ။ ဥပမာ နိုင်ငံနဲ့လိုက်ပြီး IP Ban တာတို့၊ admin login Panel ကို Directory ပြောင်းတာတို့၊ wpconfig.php မှာ admin access ကို မိမိ IP တစ်ခုတည်းကနေပဲခွင့်ပြုပြီးအခြား IP အားလုံးကို Deny လုပ်ထားတာတို့ .htaccess file တွေကို လုံခြုံစေတာတို့ဘာညာကွိကွပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း Google ကနေတွေ့ထားတာလေးကို ပြန်ရှယ်ရုံပါပဲ။ ပြောရရင် WP ကိုကောင်းကောင်းမကိုင်ဖူးတော့ လိုအပ်တာတွေရှိရင် နားလည်ပေးကြပါဗျာ။ သေချာတာကတော့ ဘယ်အရာမှ 100% secure ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲမှာပါ။ :
Modem အတွင်း Sim Card မပါပဲ အင်တာနက် အသုံးပြုနည်းစာအုပ်
ဒါလေးကတော့ Modem တည်းမှာ SIM Card မ၇ှိဘဲ အင်တာနက်သုံးနိုင်သလို ကြိုက်သလို ကလိနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဖတ် ပြီးရင် နည်းနည်းဦးနှောက် ထပ်သုံးကြည့်ပါ။
Thursday, 29 August 2013 Unknown
Run, Task Manager, Folder Option, Registry Editor, Hide File Extention virus ကိုက်လို့ antivirus software တစ်ခုခု နဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ အဲချိန်ကြ virus ကတော့ကင်းရှင်းသွားပြီးပေါ့ Run, Task Manager, Folder Option, Registry Editor, Hide File Extention တွေကတော့ ပုံမှန် အလုပ်မလုပ်တာတွေ ကြုံဖူးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဒါကိုပုံမှန် အလုပ်လုပ်အောင် bat file လေးတစ်ခု ရှင်းကြရအောင်နော် အောက်မှပေးထားတဲ့ စာတွေအားလုံးကို notepad မှာ ရေးပေးပါ (ctrl+c/ctrl+v) နာမည်ကိုတော့ (.bat) လို့ပေးလိုက်ပါပီးရင် run ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် restart ချပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် Run, Task Manager, Folder Option, Registry Editor, Hide File Extention တို့ အားလုံးမူလအတိုင်း အလုပ်ပြန်လုပ်တာကို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည် (မှတ်ချက် ဘာအန္တရာယ်မှမရှိကြောင်း အာမခံပါတယ်ခင်မျာ ဒီ bat file ကြောင့် စက်တစ်ခုခု ဖစ်တယ်ဆိုရင်တက်ဆဲ နိုင်ပါတယ် ) ကျွန်တော်စမ်းပြီးမှ တင်ပေးလိုက်ပါ အဆင်ပြေပါစေခင်မျာ=============
reg delete hkcu\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_policies\_explorer /v NoRun /f
reg delete hkcu\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_explorer\_advanced /v HideFileExt /f
attrib -a -s -h -r "system32"
By AC Vs DC
USE GOOGLE CHROME FOR HACKING
Pentesters သို့ မဟုတ် Hacker အများစုဟာ သူတို့ အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ plugin တော်တော်များများ အသုံးပြု လို့ ရတဲ့ Mozilla Firefox Browser ကို အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။
ဒါက အရင်တုန်းကပါ အခုဆိုရင်တော့ Chrome Browser မှာ Pentesters တွေ အသုံးဝင်တဲ့extension တွေ တော်တော်များများရှိနေပါပြီ။
အဲ့ဒီ အထဲကမှ အသုံးဝင်မယ် ထင်တာလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
XSS Rays မှာ Scanner, Reverser နဲ့DOM inspection tool တွေပါဝင်ပါတယ်။
XSS Rays ရဲ့Official Description ထဲမှာ ရေးထားတာတွေကတော့
Official DescriptionXSS Rays isasecurity tool to help pen test large web sites. It's core features includeaXSS scanner, XSS Reverser and object inspection. Need to know howacertain page filters output? Don't have the source? No problem. XSS Rays will blackbox reverseaXSS filter without needing the source code
Web application attacks တွေတော်တော်များများကို detect လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ scanner ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ fully automated ဖြစ်ပြီး user friendly ဖြစ်ပါတယ်။
- websecurify scanner ကို အောက်က link ကနေ download လုပ်လိုက်ပါ။
- Scan ဖတ်ချင်တဲ့ URL ကို ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ automatic scanning လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
HTTP FINDERHTTP Finder ကတော့ Http Parameter Pollution attacks ကို အလွယ်တကူ detect လုပ်နိုင်ပါတယ်။ HTTP Parameter Pollution ဆိုတာ နောက်ဆုံးပေါ် web application attacks တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
HTTP Finder ရဲ့Official Description ထဲမှာ ရေးထားတာတွေကတော့
XSS CHEFXSS CHEF ဆိုတာ google chrome အတွက် BEEF (Browser Exploitation Framework) ကို အကောင်းဆုံး replacement လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ exploitation process တွေကိုလည်း လွယ်ကူစေပါတယ်။
COOKIE EDITORCookie Editor ကလည်း Google Chrome မှာ Hacker တွေအတွက် အလွန် အသုံးဝင်တဲ့ extension တစ်ခုပါပဲ။ အများအားဖြင့် session hijacking attacks အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။
Session Hijacking နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျနော် introduction သဘောမျိုးရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ရှိပါတယ် မဖတ်ရသေးရင် ဒီမှာသွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Posted at 07:220comments
Google-chrome ကနေ ကိုယ့် Android phone ကိုဘယ်လို control လုပ်မှာလည်း ?
Wednesday, 28 August 2013 Unknown
Google-chrome ကနေ Android phone ကို လှမ်းပြီး manage လုပ်ဖို့ internet တော့လိုပါတယ် ။
Google chrome က AirDroid app ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Google chrome မှာ AirDroid app ကိုထည့်ထားလိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာလည်း Airdroid app ကိုထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
google-chrome အတွက် Airdroid ယူရန် ။
Android phone အတွက် Airdroid ယူရန်။
Playstore ကနေလည်း Airdroid လို့ရိုက်ရှာပြီးရ ယူနိုင်ပါတယ် ။
Google-chrome မှာ Airdroid ထည့်ထားပြီးရင် app ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင် sign in via Google နဲ့ icon ပုံလေးမှာ ကလစ်လိုက်ပါ ။ဒါက google account ကိုအသုံးပြုပြီး sign in လုပ်တာပါ ။ google အကောင့်ကိုအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်လည်း Create an airdroid account ကိုနိပ်ပီး sign up လုပ်ပီး
နောက်တစ်ခုက Phone ပေါ်က Airdroid app ကိုဖွင့်ပြီး ခုနက ၀င်ထားတဲ့အကောင့်နဲ့ ၀င်လိုက်ပါ ။
အဲ့ဆို သူ့ကိုယ်သူ chrome နဲ့ phone နဲ့ ချိတ်ပေးပါလိမ့်မယ် ။
ခုဆို Google ကနေ app တွေကို manage လုပ်တာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဖုန်းကိုသူများခိုးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်
တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ် ။အဆင်ပြေကြပါစေ ။
Tuesday, 27 August 2013 Unknown
ကျွန်တော်တို့ သင့်ရဲ့ Facebook account ကို တစ်ခြားတစ်ယောက်က ၀င်သုံးသွားတယ်လို့ သံသယ ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လို Trace လိုက်မလည်း။ပြီးတော့ အဲဒီလူရဲ့ တည်နေရာကို
ဘယ်လိုခြေရာခံပြီးတော့ ဘယ်လို သင့်အကောင့်ထဲကနေ လှမ်းပြီးSign Out လုပ်မလည်းဆိုတာကိုပြောပါ့မယ်။
ကဲ စမယ်။အရင်ဆုံး သင့် Facebook Account ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ပြီးသွာ့းရင် Setting ထဲက Account Setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ.
သေချာမှတ်ထားပါ။ပြီးရင် Google ထဲမှာ http://whatismyipaddress.com
Networking နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ် ၈ အုပ်ကို စုစည်းဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဆရာဇော်လင်း (Youth) ရဲ့ Complete Network Guide စာအုပ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ...
C++ Programming နည်းပညာ
Programming လေ့လာနေတဲ့ သူတွေအတွက် C++ ရဲ့ basic လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အပိုင်း၁ နဲ့ အပိုင်း၂ ရှိပါတယ်။ နောက်မှကျွန်တော်ထပ်သင်ပေးပါ့မယ် ။ခ...
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် မန္တလေးက အလက်ထရောနစ် ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်တယ်။ သူ့အလုပ်ကတော့ စာရင်းဇယား ကိစ္စပေါ့ဗျာ၊ Excel ကို Basic မှာ...
ဒါလေးကတော့ Modem တည်းမှာ SIM Card မ၇ှိဘဲ အင်တာနက်သုံးနိုင်သလို ကြိုက်သလို ကလိနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဖတ် ပြီးရင် နည်းနည်းဦးနှောက် ထပ်သုံးကြည့်ပ...
Design By ITpinlonthar